“बजारमा चाँडै चर्चा कमाउने मनाशयले निकालेका कतिपय छाँडा गीतहरु देख्दा अलिक दुःख लाग्छ । मेरो बिचारमा छाडापनलाई अलिकति कलात्मक ढंगले समाजले पच्ने खालको निकाले राम्रो हुने हो जस्तो लाग्छ । कलाको खाँसै उपयोग भएको छैन मात्र छाडापन गाइएको छ र देखाइएको छ । यो लोकसंगीतको निम्ति ठुलो घातक लक्षण हो । तर साथमा राम्रा र स्तरीय गीतहरु पनि बजारमा छ । यद्यपी कतिपय त्यस्ता स्तरीय गीतले बजार पाउन सकेको छैन ।”
नेपाली लोक दोहोरी गीत संगीत नेपाली बजारमा अत्यन्त फैलिएको छ । यस अर्थमा नेपाली संगीत धनि छ । प्रतिभा र संगीतको हिसाबले धनि भएता पनि ब्यवसायिक र आर्थिक हिसाबले कतिको तिब्र विकास भएको छ । त्यो चाहि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । साथमा लोक दोहोरी गीत संगीत क्षेत्रमा लाग्ने नवप्रतिभाहरु पनि निकै आएका छन् । त्यस्तै एक प्रतिभा हुन् शुरेश राना मगर । स्यांजाबाट पोखरा सांगीतिक भविष्य बनाउन र संघर्ष गर्न झरेका शुरेशले आफ्नो पहिलो गीत “बैश घुमेर” भर्खरै मात्र बजारमा ल्याएका छन् । छोटो समयमा धेरैले मन पराईदिएका यो गीतको बिषयमा र शुरेशको सांगीतिक भविष्यको बारेमा आलोपालो डट कमका पोखरा संवादातासंग भएको विशेष कुराकानी ।
पहिलो गीत “बैश घुमेर” को प्रचार प्रसामा हुनुहुन्छ । प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
– अपेक्षा गरेभन्दा धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । यो मेरो पहिलो गीत हो । जुन यो अघि कुनै अनुभवहरु थिएन । सम्पुर्ण मेरा आफन्त दाईहरुको साथ र सहयोगले यो गीत निकाल्न सके । जे होस् राम्रै कमेन्ट प्राप्त गरेको छु ।
सुपरहिट म्युजिक क्रियशनले यो गीतको भिडियो पनि तयार पारेको छ । उनको युट्युब च्यानलमार्फत अपलोड गरेको भिडियो हप्तामा १० हजार भन्दा बढिले हेरिसकेका छन् ?
यसको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
– विशेषतः गीत भिडियो तयार पार्नको निम्ति आर्थिक सहयोग गर्ने दाईहरु राजु राना लगायत सम्पुर्णले साथ दिनुभो । उहाँहरुलाई नै दिन्छु र मेरा सम्पुर्ण गीत मन पराईदिनुहुने दर्शक श्रोतालाई पनि यसको श्रेय जानेछ ।
के देख्नुभो ताकि यति छोटो समयमा लोकदोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभो ?
– सानैबाट गाउने रहर मभित्र पलाईरहेको थियो । साथै इच्छा पनि लोकदोहोरी गायक बन्ने नै थियो । त्यहि भएर यो क्षेत्रमा लागियो ।
नेपाली संगीतमा लागेर कलाकारको जिबन “सेक्युर” छ जस्तो लाग्छ ?
– गर्नेले त गरिरहेका छन् । देशविदेशका कार्यक्रम, स्वदेशकै महोत्सव लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । ति बाहेकका केहि कुराहरु जस्तो एल्बम बिक्रि, रोयल्टीहरुबाट चाहि पैसा नै कमाउन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहि छैन । म नि त्यस कुरामा आशा भने राख्दिन । हेर्दै जाऊ, समय र परिस्थितिले के गर्छ । सकेको गर्दै जाने हो, कलालाई प्रेम गरिराख्ने हो ।
त्यसोभए तपाईले कलाकारिता क्षेत्रलाई सौखको रुपमा मात्र लिनुभएको हो ?
– सौखको रुपमा मात्र भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा म यहि कलाकै कारणले पनि बाचिरहेको छु । जस्तो म हाम्रो दोहोरी साँझ पृथ्वीचोक पोखरामा लोकदोहोरी गायकको रुपमा कार्यरत पनि छु । त्यो कारणले सौख मात्र पनि भनिहाल्न मिल्दैन । तथापी म सुरुवाती खण्डमा भने सौखकै रुपमा लिदै आए । “म्याचुर” हुन अझै समय लाग्छ । हेर्दै जाऊ, सबैको साथ सहयोग र प्रेम पाए बृहत ढंगले अघि बढ्दै जाने सोच छ ।
अहिलेको लोक दोहोरी संगीतलाई तपाईले कसरी नियाल्नु भएको छ ?
– बजारमा चाँडै चर्चा कमाउने मनाशयले निकालेका कतिपय छाँडा गीतहरु देख्दा अलिक दुःख लाग्छ । मेरो बिचारमा छाडापनलाई अलिकति कलात्मक ढंगले समाजले पच्ने खालको निकाले राम्रो हुने हो जस्तो लाग्छ । कलाको खाँसै उपयोग भएको छैन मात्र छाडापन गाइएको छ र देखाइएको छ । यो लोकसंगीतको निम्ति ठुलो घातक लक्षण हो । तर साथमा राम्रा र स्तरीय गीतहरु पनि बजारमा छ । यद्यपी कतिपय त्यस्ता स्तरीय गीतले बजार पाउन सकेको छैन ।
संगीतमा लाग्ने प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो ?
– स्याङजा जिल्लाको गाउँहरु त्यसो त लोकदोहोरी कलाकारको उर्वरभुमि नै मान्छु । त्यहिका कलाकारहरुको गीत सुन्दै हुर्किदै आइयो । त्यहि मान्छु म । साथमा मेरो परिवारहरु बुबा ममि दाईहरुको उत्साह र हौशलाले पनि आजको यो ठाउँसम्म छु ।
तपाईको बुबा ममिले के भन्नुहुन्छ यो नयाँ गीत निकाल्दा ?
– राम्रो गर्यौ । अझै अगाडि बढ । आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम पनि हुन सिक्नु पर्छ है भन्नुहुन्छ । त्यहि भएर कला क्षेत्रलाइ साथ साथै आफुलाई आत्मनिर्भरको निम्ति केहि सोचहरु बनाइरहेको छु ।
– कोरीयन भाषाको परीक्षा दिएर रिजल्टको पर्खाईमा छु । कस्तो हुन्छ पास भए जानुपर्ला । उत्ता गए पनि नेपाली लोक दोहोरी संगीत क्षेत्रलाई भने माया गरिरहन्छु । नयाँ नयाँ कृतिहरु निकाल्ने कोशिष गरिरहन्छु । यदि नभए विकल्पमा अरु पनि योजनाहरु छन् ।
नेपालमै सम्भव छैन आत्मनिर्भर बन्न ?
– धेरै छ । तर यहाँको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले म जस्तो यूवाहरुले सिधा तरिकाले सोच्ने त्यहि न हो । माहौल बनाइयो कार्यन्वयन गर्न नसकिने हो कि झै हुन्छ । र पनि विदेशमा पनि सजिलो त छैन । तर कम्तिमा काम राम्रो भो भने पछिको भविष्यलाई चिन्तित हुनुपर्दैन कि भनेर हो ।
“बैश उमेर” पछि अरु केहि नयाँ आउदैछ ?
– झट्टै कुनै तयारी छैन । यहि गीतको तयारी छ । यो गीतमा सबैको ठुलो सहयोग छ । त्यसकारण यसको प्रचारप्रसारमा सबैले साथ दिइराख्नुभएको छ । हेरौ के हुन्छ ।
संगीत सिक्नुभो ?
– सिकिरहेको छु ।
संगीत सिकेर गाउँदा र नसिकी गाउँदा के फरक पाउनुभएको छ ?
– नसिकी गाउँदा राम्रै गाए भन्ने भान हुन्छ । तर सिकीसकेपछि सुर, ताल र स्वरको विषयमा गहन अध्ययन गर्न पाइन्छ । त्यसो हुनासाथ कुनै गीत गाउँदा कतै ताल बिग्रिन्छ कि सुर बिग्रिन्छ कि भन्ने डर हुँदा रहेछ ।
तपाईलाई मन पर्ने गायक गायिका को को हुनुहुन्छ ?
– यो समयमा त मलाई रामजी खाँड, खुमन अधिकारी, सञ्जय पुन मगर मन पर्छ । गायिकाहरुमा विष्णु माझी, मुना थापा मगर मन पर्छ ।
आफुलाई मन पर्ने त बेग्लै तर बैश उमेर त देबी घर्ती मगरसँग गाउनुभयो नि ?
– खाँसमा यो गीत मुना थापा दिदिसँग गाउँने भनेर कुरा अगाडि बढाएको हो । त्यो समय मुना दिदिको समय अलिक नमिलेर देबी दिदिसँग गरे । त्यो पनि त्यहि रेकर्ड गर्ने दाईहरुले नै मिलाउनुभएको हो । उहाँले नि राम्रो गाउनुभएको छ ।
देबी घर्ति मगरबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
– पछि अन्य माध्यमहरुबाट राम्रो उत्साहपुर्ण प्रतिक्रिया दिनुभयो । प्रत्यक्ष भेटघाट त भएन तर पछि गीतहरुको भिडियो बनाए पछि राम्रो नै हुन्छ भन्नुभएको थियो । म यता पोखरा हुँदा उत्ता काठमाण्डुमा रेकर्ड गर्नुभएको थियो । अत्यन्तै राम्रो तरिकाले दिदिले गाउनुभएको छ ।
समय दिनुभयो । धेरै धन्यवाद ।
– यहाँलाई अनि यहाँहरुको मिडिया आलोपालो डट कमलाई पनि धेरै धन्यवाद बिचार राख्ने अवसर दिनुभएको मा ।